तिजमा घाम लाग्छ कि पानी पर्छ ? यस्तो भन्छन् मौसमविद् | ईमाउण्टेन समाचार
भदौ २२, २०७८ पढ्न ५ मिनेट
काठमाडौं । बिहीबार अर्थात् २४ भदौमा हरितालिका तिज मनाइँदैछ । त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार दरखाने प्रचलन नारीहरूमा छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ कै कारण जमघटसहित तिज मनाउन पाइएन, यो पटक पनि कोभिड–१९ कै जोखिम छ ।
अर्काे चिन्ता छ– आइतबार साँझबाट मौसम प्रतिकूल बनेपछि यो पटकको तिज पनि हिलोमय हुने त होइन ? आइतबार रातिकोजस्तो ठूलो वर्षा नभए पनि सोमबार राति पानी परेको छ ।
मंगलबार बिहान काठमाडौंसहितको आकाशमा बादल लागेको छ– प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।
बुधबार र बिहीबार दिउँसो भारी वर्षाको सम्भावना नभए पनि बादल लागिरहने र बेलाबेला पानी पर्नसक्ने उनले बताए । जसले तिजको पूजाआजा गर्न मठमन्दिर हिँडेका नारीलाई असर गर्नसक्छ– सडकमा हिलो बढ्न सक्छ ।
हाल नेपालमा बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव छ भने पश्चिम नेपालमा मनसुनी न्यून चापीय रेखाको असर छ । उक्त रेखाका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा लुम्बिनी र गण्डकीका पश्चिमी भेगमा वर्षाको सम्भावना छ । हाल तराई नजिक रहेको मनसुनी रेखा उत्तर–पूर्व सर्दै गएमा अझ वर्षा हुनसक्ने आँकलन मौसमविद्ले गरेका छन् ।
तर, तिजको दिन अर्थात बिहीबार राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थान र अन्य प्रदेशका एक÷दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जसको असर काठमाडौं उपत्यकामा पनि पर्ने मौसमविद् सापेकाटाले उल्लेख गरे ।
काठमाडौँका अधिकांश पार्टी प्यालेस तिज कार्यक्रमका लागि अग्रिम बुकिङ
अमेरिकामा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमित बढ्दै
कोभिड – १९ को तेस्रो भेरियन्ट निकै संक्रामक : इपिडेमियोलोजी महाशाखा
ओभरडोज औषधिको सेवनबाट अमेरिकामा एक वर्षमा १ लाख जनाको मृत्यु
लकडाउनमा टेकु अस्पताल कसरी संचालनमा ? (भिडियोसहित)